cleanroom sangweji Panel Fekitori | China cleanroom sangweji pani Vagadziri, Vatengesi
dombo remvere sangweji pani ine yakapetwa kaviri magnesium oxide mabhodhi
Inotora yakanaka yepamusoro PCGI pepa pepa ine EPS yekuzadza. Ruoko rwakagadzirwa neGI kana Aluminium profile furemu.
75mm 50mm isina moto isina huremu yakasungirirwa EPS samende sandwich yemadziro emadziro eakagadzirirwa imba fekitori imba yekuchengetera
nyowani mhando yepamusoro sandara aluminium silicate sangweji pani yemadziro pani
Inotora yakanaka mhando PCGI pevhu pepa ine aluminium silicate filler. Ruoko rwakagadzirwa neGI kana Aluminium profile furemu.
isina moto MGO board magnesium oxide sandwich panel
isina moto silicon dombo sangweji pani yemadziro edenga yakachena kamuri
magnesium oxysulfate sangweji pani yemakamuri akachena mishonga yemafekitori chikafu muchipatara chisina moto